Nang Poe Hnin Phyu - Burmese to English translator. Translation services in Business/Commerce (general)
Nang Poe Hnin Phyu
Business, Education and Entertainment
Payment methods accepted PayPal, MasterCard, Wire transfer, Check
English to Burmese: POSITION STATEMENT TO BE ADOPTED BY THE 4TH ASEAN MINISTERIAL MEETING ON DRUG MATTERS
POSITION STATEMENT TO BE ADOPTED BY
27-30 OCTOBER 2015, MALAYSIA
The following position statement representsaunited ASEAN approach, which we recommend to be adopted by the Ministers at the 4th ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (4th AMMD) to be held in Langkawi, Malaysia from 27-30 October 2015. We recommend that the key points of this position statement be incorporated into the Chairman’s Statement at the AMMD, and form the basis of an ASEAN statement to be delivered at the UN General Assembly Special Session (UNGASS) on the World Drug Problem, to be held at UN Headquarters [Th: from 19 to 21] April 2016. We also recommend that these key points be included in each ASEAN Member State’s individual country statement at UNGASS:
a.	Zero-tolerance Approach against Drugs. ASEAN embracesazero tolerance approach against drugs. Zero-tolerance means that we strongly commit to suppress and eradicate [Myanmar: eliminate] the scourge of drugs and condemn its abuse in our society. Failure to deal effectively with the drug problem undermines society, in terms of stability, [lao: social economic] development, and [Myanmar: sustainable] livelihood of our citizens as well as presentsathreat to national security and the rule of law. Drug abuse affects not just the abuser but also his family and the community. ASEAN is therefore committed toazero-tolerance approach in realising its regional vision ofaDrug-Free ASEAN, so as to provide our people and communities withasociety free from drug abuse.
b.	Comprehensive and balanced approach towards drugs: ASEAN’s approach to the drug problem has been to address it inacomprehensive, balanced and holistic manner, involving both demand and supply reduction measures. Upstream preventive measures, as well as downstream enforcement and intervention measwures, are necessary to address the drug problem. The rehabilitation and reintegration of drug addicts into society are just as important as takingatough stance against drug traffickers and those who wish to profit off drug addicts.
c.	To stand firm against drugs, including being resolute against calls for the decriminalisation and/or legalisation of drugs: ASEAN has observed an increasing favour of drug policy reforms where some countries seek to decriminalise the consumption of controlled drugs or even to legalise controlled drugs. While these countries have taken the approaches of decriminalisation and legalisation domestically given their own circumstances, this should not be imposed on other countries. There is no one-size-fits-all approach towards addressing the drug issue, each country has its own unique set of challenges.
d.	Sovereign right of each country: Each country has the sovereign right and responsibility to decide on the best approach to address the drug problem in their country, taking into account their historical, political, economic, social and cultural context and norms of its society. The trans-national challenges posed by the world drug problem should be addressed with full respect for the sovereignty and territorial integrity of States, and the principle of non-intervention in the internal affairs of States. Every Government and its citizens should decide for themselves on the most appropriate approach to tackling its own drug problem.
2.	Apart from the above key points, the 36th ASOD proposes that the Chairman’s Statement at the 4th AMMDM includes the following recommendations:
a.	ASEAN Member States are encouraged to be represented at the Ministerial-level for UNGASS 2016;
b.	ASEAN Member States to deliverajoint ASEAN Statement at UNGASS 2016, in addition to each Member State’s individual country statement; and
c.	That the 4th AMMDM seeks the support and endorsement of the ASEAN Leaders at their November 2015 Summit for the position statement and recommendations above.
၀န်ကြီးအစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုရန်တင်သွင်းသည့် သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
၂၀၁၅ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၇မှ၃၀ ရက်၊ မလေးရှားနိုင်ငံ
အောက်တွင်ပါရှိသော သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်များသည် အာဆီယံပေါင်းစည်းချဉ်းကပ်လမ်းစဉ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်ဖြစ်၍ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ လန်က၀ီ မြို့တွင် ၂၀၁၅ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၇ မှ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်သော မူးယစ်ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ လေးကြိမ်မြောက် ၀န်ကြီးများအဆင့် အာဆီယံအစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုပေးရန် အကြံပြုထောက်ခံပါသည်။
ဤသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသည့် အဓိကကျသောအချက်အလက်များကို AMMD ဥက္ကဌ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် တရားဝင်ပေါင်းစပ်သွားရန်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၆ခုနှစ် ဧပြီလတွင်၊ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်သော ကမ္ဘာ့မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာဆိုင်ရာ UN General Headquaters Special Session (UNGASS) တွင် အာဆီယံအခြေခံထုတ်ပြန်ချက်ကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်လည်းကောင်း အကြံပြုထောက်ခံအပ်ပါသည်။ ထို့အတူ ဤထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသည့် အဓိကကျသောအချက်အလက်များကို အာဆီယံအသင်းဝင်နိုင်ငံများ၏ UNGASS တွင်ပါဝင်မည့် နိုင်ငံအလိုက်ထုတ်ပြန်ချက်များတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြရန် ထောက်ခံအကြံပြုအပ်ပါသည်။
က။	မူးယစ်ဆေးဝါး ဥပဒေ ကို ချိုးဖောက်သည့် အပြုအမှုအား လုံးဝငြင်းပယ်ခြင်း။
အာဆီယံသည် မူးယစ်ဆေးဝါးဥပဒေ ကို ချိုးဖောက်သည့် အပြုအမှုကို လုံးဝငြင်းပယ်သည့် ချဉ်းကပ်နည်းစဉ်ကို လက်ခံယုံကြည်ပါသည်။ ဤသို့ မူးယစ်ဆေးဝါးဥပဒေကို ချိုးဖောက်သည့်အပြုအမှုအား လုံးဝငြင်းပယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါး အန္တရာယ်များကိုသုတ်သင်ရှင်းလင်းရန်နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်းများကို ပြစ်တင်ရှုံ့ချခြင်းများကို ဆိုလိုပါသည်။
လူမှုအဖွဲ့အစည်းကို လှိုက်စားနေသော မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာများကို နည်းစနစ်ကျကျ နိုင်နင်းစွာကိုင်တွယ်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ပြည်သူလူထု၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုထိခိုက်စေရုံသာမက၊ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပါ ခြိမ်းခြောက်နိုင်ပါသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားပြုမှုသည် အသုံးပြုသူကိုသာမက ၄င်း၏မိသားစုနှင့် လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အာဆီယံ၏ မူးယစ်ဆေးဝါး ဥပဒေ ကို ချိုးဖောက်သည့် အပြုအမှုအား လုံးဝငြင်းပယ်သည့် ချဉ်းကပ်လမ်းစဉ်သည်
“မူးယစ်ဆေးဝါးကင်းစင်သည့် အာဆီယံ” ဖြစ်ရန်ဟူသည့် ဒေသအလိုက်မျှော်မှန်းချက် ကို ခိုင်မာစေသည်သာမက ပြည်သူလူထုအား မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုကင်းစင်သည့် လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ခ။	မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာကိုချဉ်းကပ်ရာတွင် စေ့စပ်သေချာ၍မျှတသော နည်းစနစ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာကိုချဉ်းကပ်ရာတွင် အာဆီယံ၏လမ်းစဉ်သည် အလုံးစုံစေ့စပ်သေချာပြီး မျှတမှုရှိသော နည်းလမ်းဖြစ်သင့်ပြီး ၀ယ်လိုအား၊ရောင်းလိုအားများအားလျှော့ကျရေး အတိုင်းအတာစီမံချက်များပါဝင်သင့်သည်။ တစ်ဖက်တစ်လမ်းတွင် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတိုင်းအတာများပြုလုပ်သည်နှင့်အညီ၊ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှလည်း ဥပဒေလိုက်နာစိုးမိုးခြင်းများသည် မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ရာတွင် လိုအပ်ပါသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသူများကို ခုတုံးလုပ်ကာအကျိုးအမြတ်ရှာဖွေရယူနေသော မူးယစ်ဆေးဝါး တရားမ၀င်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများအား ထိရောက်စွာ အရေးယူခြင်းသည် အရေးကြီးသကဲ့သို့ မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသူများအားပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်သို့ ပြန်လည်နေရာချထားပေးခြင်း သည် အရေးပါလှပါသည်။
ဂ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအား ပြတ်သားစွာဆန့်ကျင်ပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးပြစ်မှုဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များ ပပျောက်စေခြင်း (သို့) မူးယစ်ဆေးဝါးများအား တရားဝင်ပြုလုပ်စေခြင်းများအား ယတိပြတ်ငြင်းဆိုခြင်း။
အချို့သောနိုင်ငံများသည် ထိန်းချုပ်ထားသောမူးယစ်ဆေးဝါးများအား တရားဝင်ပြုလုပ်ခြင်းများ၊ ထိန်းချုပ်မူးယစ်ဆေးများအား သုံးစွဲခြင်းကို ပြစ်မှုမမြောက်စေရန်ကြိုးပမ်းလာမှုများကို အာဆီယံအနေဖြင့် မြင်တွေ့လာရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ မူးယစ်ဆေးဝါးပြစ်မှုဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များ ပပျောက်စေခြင်း နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအား တရားဝင်ပြုလုပ်စေခြင်းများအားကို ၄င်းတို့ နိုင်ငံပြည်တွင်း၌ဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေအများအလိုက်ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက် နေသော်လည်း၊ အခြားနိုင်ငံများအား ၄င်းနည်းတူဆောင်ရွက်ရန် ဖိအားမပေးသင့်ပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ကိုယ်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံခြင်းစီတွင် ကွဲပြားခြားနားပြီး မတူညီသော စိန်ခေါ်ချက်များရှိသောကြောင့် နိုင်ငံတိုင်းနှင့်လျှော်ညီသော ဖြေရှင်းနည်းလမ်းမရှိနိုင်ပါ။
ဃ။ နိုင်ငံတိုင်း၏ အချုပ်အခြာအာဏာဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာကို ချဉ်းကပ်ရာတွင် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းကိုအသုံးပြုရန် ၄င်းနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် တာဝန်ကိုအသုံးပြုကာ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ၄င်းနိုင်ငံ၏ သမိုင်းအထောက်အထား၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ လက်ခံကျင့်သုံးသည့် ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံအရပ်ရပ်ကို စိန်ခေါ်နေသာကမ္ဘာ့မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင် နိုင်ငံများ၏ အချုပ်အခြာအာဏာ၊ နယ်ပယ်ဥပဒေသများ နှင့် “ပြည်တွင်းကိစ္စရပ်များအား ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိစေရဟူသောမူ” အား အပြည့်အ၀လေးစားသမှုဖြင့် ဖြေရှင်းသင့်ပါသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာအား အသင့်တော်ဆုံးနည်းလမ်းဖြင့် ကိုယ်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ၄င်းနိုင်ငံ၏အစိုးရနှင့် ပြည်သူများမှ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ရှိသင့်ပါသည်။
၂။ အထက်တွင်ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသော အဓိကအချက်များမှအပ၊ လေးကြိမ်မြောက် AMMDMတွင်ပါဝင်မည့် ဥက္ကဌ၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ထည့်သွင်းရန် ၃၆ကြိ်မ်မြောက် ASOD မှ အဆိုပြုတင်သွင်းသည့် အကြံပြုချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(က) ၂၀၁၆တွင် ကျင်းပမည့် UNGASS တွင် အာဆီယံအသင်းဝင် နိုင်ငံများမှ ၀န်ကြီးအဆင့်ရာထူးရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ မှ ကိုယ်စားပြုတက်ရောက်ရန် တိုက်တွန်းခြင်း။
(ခ) အာဆီယံအသင်းဝင်နိုင်ငံများမှ အာဆီယံပူးပေါင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ၂၀၁၆ UNGASS တွင် ပေးပို့ပါရန်၊ အာဆီယံအသင်းဝင်နိုင်ငံများအသီးအသီးမှ နိုင်ငံအလိုက် သီးသန့်ထုတ်ပြန်ချက်များကို ထုတ်ပြန်ပေးပါရန်နှင့်
(ဂ) ၂၀၁၅ခုနှစ် နိုင်ဝင်ဘာ၌ကျင်းပမည့် ညီလာခံတွင် အထက်ပါအကြံပြုချက်များနှင့် သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ကို အာဆီယံခေါင်းဆောင်ကြီးများမှ ပံ့ပိုးထောက်ခံပေးပါရန် လေးကြိမ်မြောက် AMMDM မှ အဆိုပြုပါသည်။
If you're looking forahighly enthusiastic Master’s graduate withabroad range of knowledge in business terms in both Burmese and English, you have come to the right place.
I amanative Myanmar, withabroad range of experience having lived in many culturally diverse places. My undergraduate degree allowed me to specialize in English, enabling me to translate into either UK or US English.
My expert credentials include:
1) Master of Business Administration in Entrepreneurial Management, Mae Fah Luang University, Thailand.
2) Postgraduate Degree in Enterprising, KU Leuven and Group T International University College, Leuven, Belgium.
3) Bachelor of Arts in English, University of Foreign Languages, Yangon, Myanmar. And I am currently enrolled in Erasmus Mundus Master Program in Humanitarian Action.
I began my translation experience duringa6-months long internship asaPublic Administration Officer at the International Affairs Division of Mae Fah Luang University. I was assigned with the duties to translate, edit and proofread Burmese-English, English-Burmese documents. I strengthened my translation skills when I worked at Thailand-based INGO as an Administrative Officer. There again, I was responsible for similar tasks such as translation of official documents from Burmese to English, proofreading and editing.
I specialise in the areas which are related to business, organizational management, marketing and advertising, general documentation, development management, policy documents and movie subtitles. Importantly, I have the skills and flexibility to adapt my experience to suit any new dimensions or subject areas.
Thank you for the consideration in working with your organization.
More translators and interpreters: Burmese to English - English to Burmese More language pairs